गरिमा विकास बैंकले पायो ऋणपत्र निष्कासन अनुमति, कति पाइन्छ ब्याज ? - Aathikbazarnews.com गरिमा विकास बैंकले पायो ऋणपत्र निष्कासन अनुमति, कति पाइन्छ ब्याज ? -
गरिमा विकास बैंकले पायो ऋणपत्र निष्कासन अनुमति, कति पाइन्छ ब्याज ?
गरिमा विकास बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।
बैंकले ८.७५ % ७ वर्ष गरिमा डिबेञ्चर, २०८५’ निष्काशन गर्न अनुमित पाएको हो ।
बैंकले १ अर्ब रूपैयाँको १० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । बैंकले १० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये सर्वसाधारणलाइ ४ लाख कित्ता निष्काशन गर्ने छ भने बाँकी रहेको ६ लाख कित्ता आफैले विभिन्न संघ संस्थालाई बिक्री गर्नेछ ।
ऋणपत्रको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । ऋणपत्रले ८.७५ प्रतिशत ब्याज दिनेछ ।
लुम्बिनी विकास बैंकको साधारण सभा पुस ९ गते, १३.६८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
गरिमा विकास बैंकद्वारा गरिमा डिवेन्चर २०८५ निष्काशन
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको बुक क्लोज तय, मंसिर २४ सम्ममा सेयर किन्नेलाई १:१ को अनुपातमा हकप्रद
एनसीसी बैंकले घोषणा गर्‍यो लाभांश, सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस
महालक्ष्मी विकास बैंकको २१.०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, बोनस कति ?
सिटिजन्स बैंक र सहयोगी विकास बैंक एकीकृत कारोबार पुँजी ९ अर्ब नाघ्यो
देवः विकास बैकद्वारा सामाजिक सहयोग